Somaliya Oo Khaati Ka Taagan Mucaawanada Hay’adda WFP |
Somaliya Oo Khaati Ka Taagan Mucaawanada Hay’adda WFP
London(GNN)-Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedaysay hay’adda WFP in ay raashinkeeda gargaarka ah ku beegto xiliga uu dalagu usoo go’ayo beeralayda Soomaalida. Dowladda ayaa qorshaha WFP ku tilmaamnay mid khalad ah, waxayna ugu baaqday inay arrintaasi ka waantowdo. Somalia iyo beeralayda dalag laga iibsan karo soo saara ayaa khaati ka taagan qorshaha WFP.
Hadalka waxaa VOA u sheegay wasiir-kuxigeenka wasaaradda beeraha Cabdicasiis Saalax Carmaan, isagoo sidoo kale sheegay in wasaaraddu ay qorshaynayso in la horumariyo beeralayda Soomaaliyeed, lana dhiirigaliyo shirkaddaha caalamku in ay maalgalin ku samaystaan dalka Soomaaliya oo dhowaan baarlamankiisu uu ansixiyey sharciga maalgashiga.
Wasiir xigeenka oo arrintan ka hadlaya ayaa yidhi “WFP Qorshaha ay ku socotaa waa khalad mana yeelaynno mana doonaynno. Mar allaale marka beeralaydayada dalaggu u soo go’o inay cunto u keentaa waa khalad. Waxaan rabnaa inay ka waantowdo, waxaan rabnaa inay ka joogto. WFP haddii ay doonayso inay beeralaydayada wax u qabato cuntada ha ka iibsato si ay niyadda ugu dhisanto umaddana wax ha siiso.”
Hadalka Wasiir ku-xigeenka ayaa kusoo beegmaya maalmo uun ka hor shirweyne looga hadlayo wax soo saarka beeraha dunida oo ka furmi doona magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.